मैले मेरो महँगो वेबसाइट रिपोर्टि Di र दिबको लागि विश्लेषण उपकरण रद्द गर्‍यो Martech Zone
COVID-19 सँग सम्बन्धित हराएको राजस्वको साथ, मैले वास्तवमै उत्पादनहरू जुन अन्वेषण, मोनिटर, रिपोर्ट, र मेरो साइटहरू र मेरा ग्राहकहरूको अनुकूलित गर्न प्रयोग गर्दै थिएँ त्यसको पुन: मूल्यांकन गर्नुपर्‍यो। म प्रति केहि सयौं डलर खर्च गर्दै थिएँ यसका लागि केहि धेरै उपकरणहरू। साथै, प्रत्येक उपकरणसँग धेरै रिपोर्टहरू र विकल्पहरू थिए - तर मैले डाटाका माध्यमबाट कंघी कार्य गर्नु पर्ने सल्लाहहरू पाउनको लागि जुन मैले साइटहरूलाई अनुकूलित गर्न प्रयोग गर्न सक्थें।
अर्को शब्दहरु मा, म एक टन पैसा तिरेको थियो ... र वास्तवमै मलाई चाहिने उत्तरहरू पाइन। मैले विगतमा यस बारेमा मजाक गरें ... कि एनालिटिक्स उपकरणहरू वास्तवमै सही छन् प्रश्न इन्जिन र छैन जवाफ इन्जिनहरू। तपाईले डेटा, खण्ड, फिल्टर, र आगन्तुकहरूको ब्यवहार तुलना गरेर अवसरहरूको पहिचान र प्राथमिकता दिन विश्लेषकको रूपमा यो निर्भर छ।
मँ स्पष्ट हुन चाहन्छु किनकि मैले यो उत्पादन वर्णन गरेको छु जुन मैले फेला पारे - डिब। शाब्दिक रूपमा हजारौं चीजहरू छन् जुन तपाईं वेबसाइटसँग गर्न सक्नुहुनेछ यसको दृश्यता, वृद्धि, र रूपान्तरण सुधार गर्न। केही विश्लेषणको लागि सधैं कसैलाई कार्यहरूमा डेटा अनुवाद गर्न आवश्यक हुन्छ।
डिब: उत्तर ईन्जिन
यस भिडियो बाट डिब जब तिनीहरूले years बर्ष पहिले सुरू गरेको प्लेटफर्ममा केही अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्दछ र यसले कसरी तपाईंको व्यवसायलाई मद्दत गर्दछ:
मैले सित्तैमा साइन अप गरें डिब खाता र तुरुन्तै बुद्धिमानी प्रतिक्रियासँग प्रभावित भयो जुन प्लेटफर्ममा पहिले नै साइन अप हुने मिनेटमा प्रदान गरिएको थियो। डिब तपाइँको वेबसाइटको विश्लेषण गरेर र तपाइँको बिक्री बढाउन सब भन्दा ठूलो अवसर पहिचान गरेर सुरू हुन्छ। दीब चार मुख्य समाधानमा विभाजित हुन्छ:
उत्तर ईन्जिन - एक शक्तिशाली डायग्नोस्टिक उपकरणले तपाइँको साइट स्क्यान गर्दछ र तपाइँलाई जवाफहरू मात्र दिएर अनुकूलित विकास योजनाको साथ आउँदछ।
विश्लेषण - डिब डेटा मात्र मापन गर्दैन, तिनीहरूले यसलाई तपाईंको वास्तविक भूत, वर्तमान र भविष्यका लागि वास्तविक डलर मानमा रूपान्तरण गर्छन्। तपाइँ कसरी आफ्नो उद्योग मा स्ट्याक देख्न सक्नुहुन्छ।
प्रगति ट्रैकर - तपाईंको सबै प्रयासहरू र सिकाइ ट्र्याक राख्नुहोस् ताकि तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ कि तपाईं कति टाढा आईपुग्नुभयो! अधिक प्रगति तपाईले देख्नु भयो भने तपाईले निरन्तरता दिनुहुनेछ!
लर्निंग लाइब्रेरी - यदि तपाईं आफैले आफैलाई मार्केटर गर्नुहुन्छ भने, दिबसँग तपाईंको औंलाको टिप्समा टिप्स, उपकरणहरू र ट्यूटोरियलहरू छन्। तिनीहरूसँग भिडियो, लेख, सेतो कागजातहरू, र ईबुकहरूको स 1000s्ख्याको एक विशाल पुस्तकालय छ।
डिब तपाइँले कसरी गरिरहनु भएको छ र अर्को के गर्ने भनेर जान्नको लागि सरल, उच्च प्रभाव विश्लेषण, रिपोर्टि, र दृश्यहरू वितरण गर्दछ। डिब With को साथ तपाईलाई आफ्नो साइटको वार्षिक मूल्य थाहा छ र तपाईंको व्यवसायले कसरी तपाईंको उद्योगमा अनलाइन प्रदर्शन गरिरहेको छ। र diib ले तपाईंको व्यावसायको अनलाइन उपस्थितिको लागि कस्टम ग्रोथ योजना सिर्जना गर्दछ।
तपाईंको वेबसाइटको स्वास्थ्य जाँच गर्नुहोस्
रिपोर्टिंगको केन्द्रिय आरम्भिक वैधता हो जुन तपाईंको वेबसाइट वास्तवमा स्वस्थ छ। डिब यो एक स्वस्थ वेबसाइट को यी मुख्य सुविधाहरु को विश्लेषण द्वारा गर्छ:
SSL प्रमाणपत्र: तपाईंसँग सुरक्षित साइट नहुन सक्छ वा तपाईंको SSL प्रमाणपत्र राम्रोसँग स्थापना भएको छैन। डिबसुरक्षा को लागी आउँदा स्क्यानि engine ईन्जिन राम्रो नै छनौट हुन्छ र तपाईलाई सूचित गर्दछ यदि कुनै त्यस्तो त्रुटिहरु भेट्टाइयो जुन कि तपाईको रैंकिंग लाई प्रभावित गर्न को लागी एक आगन्तुकको ब्राउजरमा सतर्क गराउँछ।
मोबाइल गति: उत्तर ईन्जिनले तपाईको मोबाइल गति दैनिक जाँच गर्दछ। यदि तपाइँको मोबाइल गति संग एक मुद्दा छ, डिब तपाईंलाई सचेत गराउँछ।
डोमेन प्राधिकरण / ब्याकलिंक्स: यी आइकनहरूले तपाइँलाई तपाइँको हालको मोज़ डोमेन प्राधिकरण र तपाइँको वेबसाइटमा स poin्केत गर्ने ब्याकलिंक्सको सरासर संख्या बताउँछ। तपाईको सब भन्दा महत्वपूर्ण ब्याकलिlin्कको सुची पनि देख्न सक्नुहुन्छ।
फेसबुक / गुगल मेरो व्यापार सिंक: यदि तपाईंले यी दुई महत्वपूर्ण डेटा स्रोतहरू समक्रमण गर्नुभएको छैन भने, डिब तपाईंलाई सूचित गर्नेछ ताकि तपाईं महत्त्वपूर्ण उद्देश्य र सतर्कताहरू गुमाउनुहुन्छ!
साइटम्याप: यो स्क्यानले तपाईंलाई बताउँछ कि हामीले तपाईंको वेबसाइटको लागि साइटम्याप भेट्टायौं वा होइन। साइटम्यापले गुगल र अन्य खोज ईन्जिनहरूलाई मद्दत गर्दछ तपाईंको वेबसाइट क्रल गर्दछ।
कीवर्ड: यसले तपाइँलाई बताउँछ कि तपाइँको वेबसाइटले Google मा कति अनुशरण गर्‍यो। तपाईका सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुञ्जी शव्दहरू १ 150० सम्म देख्न सक्नुहुन्छ।
कालोसूची: यो एक वेबसाइट र आईपी ठेगाना स्क्यान हो जसले तपाईंलाई तपाईंको ईमेलहरू तपाईंको ग्राहकको ईनबक्सहरूमा डेलिभर भइरहेको छ वा छैन भनेर बताउँछ। यदि डिब पत्ता लगाउँदछ कि तपाईंको ईमेलहरू सम्भवतः इनबक्सहरूको सट्टा स्प्याम बक्सहरूमा जान्छन् उनीहरू तपाईंलाई सूचित गर्नेछ साथै तपाईंलाई समस्या सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
खोजी, सामाजिक, मोबाइल, र स्थानीय उद्देश्यहरू
एकचोटि मैले मेरो साइट सेट अप गरें, डिब खोज, सामाजिक, मोबाइल, र स्थानीय व्यापार अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्न गुगल एनालिटिक्स, गुगल व्यापार, र फेसबुक जडित थियो। मञ्चले तुरुन्तै मेरो उद्देश्यको समीक्षाका लागि केहि मुख्य लिंकहरूको साथ तुरून्त केहि उद्देश्यहरू पहिचान गर्‍यो:
डिब मेरो लेख सबैभन्दा प्रभावकारी हुनेछ जब पहिचान गर्न फेसबुक अंतर्दृष्टि विश्लेषण।
डिब केहि बुद्धिमत्ता थियो जसले मलाई देखायो कि COVID-19 ले मेरो समग्र वेबसाइट ट्राफिकलाई असर गरिरहेको थिएन।
डिब मलाई सच्याउनका लागि केहि आन्तरिक भाँचिएका लिंकहरू पहिचान गरे।
डिब केहि ब्याकलिks्कहरू पहिचान गरे जुन विषाक्त हुन सक्छ जुन म अस्वीकार गर्न चाहन्छु।
डिब एक अपवादात्मक मान हो
प्युरिस्टहरू भन्नेछन् कि यस्तै उपकरणहरू पर्याप्त व्यापक छैनन्। यो अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उद्योगहरूमा ठूला, जटिल डोमेनहरूको लागि सायद सत्य हो। तर अधिकांश व्यवसायहरू सञ्चालन गर्दैनन् जहाँ उनीहरूलाई आफ्नो अनलाइन उपस्थितिको हरेक पक्ष जाँच गर्न आवश्यक पर्दछ ... तिनीहरू आफ्नो व्यवसाय चलाउन व्यस्त छन्।
को नाममात्र लागत को लागी डिब, मानले त्यहाँ प्लेटफर्मको विशाल बहुमत भन्दा बढि छ। यो स्वास्थ्य मोनिटर, मूल्यांकन, पूर्वानुमान, उद्देश्य, र सतर्कताहरूले एक वर्षको अवधिमा औसत साइट मालिकलाई व्यस्त राख्दछ उनीहरूको वेबसाइटको वृद्धि र उनीहरूको व्यवसायको बृद्धि गर्न।
एक नि: शुल्क diib खाता प्रदान गर्दछ:
सीमित ग्रोथ योजना - बुद्धिमान दैनिक सचेतहरू र उद्देश्यहरूमा सीमित पहुँच जुन तपाइँलाई छिटो ट्राफिक र राजस्व कसरी बढाउने देखाउँदछ।
वेबसाइट अनुगमन - असामान्य ट्राफिक ड्रप, भाँचिएको वा स्प्याम्मी ब्याकलिks्क, प्रदर्शन मुद्दाहरू, सुरक्षा, वा गुगल खोजी एल्गोरिदम अपडेटहरूका लागि पनि अलर्टहरू प्राप्त गर्नुहोस्! प्रत्येक सचेतमा मुद्दा फिक्स गर्न क्रियात्मक कदमहरू सामेल छन्।
साप्ताहिक स्न्यापशट ईमेल - विकास अवसरहरू र सम्भावित मुद्दाहरूको बारेमा जानकारी राख्नुहोस्।
दैनिक स्वास्थ्य स्कोर - diib को स्मार्ट एल्गोरिथ्म वास्तविक वेबसाइट मा तपाइँको वेबसाइट को स्थिति अवलोकन गर्दछ।
बेंचमार्किंग - तपाईंको उद्योगमा समान वेबसाइटहरूसँग तपाईंको वेबसाइटको प्रदर्शनको तुलना।
एक डिब प्रो खाताको लागत $ १। .––– $ २। .19.99 / / महिना वेबसाइट ट्राफिकमा निर्भर रहन्छ र यसले निःशुल्क खातामा सबै कुरा प्रदान गर्दछ, साथ साथै:
विकास योजना - दैनिक सचेतहरू र उद्देश्यहरूमा पूर्ण पहुँच जुन तपाइँलाई छिटो ट्राफिक र राजस्व कसरी बढाउने देखाउँदछ।
30० वेबसाइटहरू सम्म - तपाइँका सबै वेबसाइटहरू एक स्क्रिनमा के गर्दै छन् हेर्नुहोस्।
व्यावसायिक मद्दत कुनै पनि समय - नि: शुल्क २//24 एक समर्पित विकास विशेषज्ञको पहुँच।
सामाजिक मिडिया - diib ले तपाइँको वास्तविक प्रदर्शन अनुगमन गर्दछ र तपाइँलाई कस्टम रोडम्याप प्रदान गर्दछ यो धेरै महत्त्वपूर्ण च्यानल बढ्नको लागि।
SEO र कीवर्डहरू - विश्लेषण र प्रीमियम मोज र मा आधारित सुधार सुझावहरू Semrush डेटा।
अब आफ्नो वेबसाइट स्वास्थ्य जाँच गर्नुहोस्!
खुलासा: हामी यसमा गर्व गर्छौं डिब.
टैग: उत्तर ईन्जिनकोविड - १।डिबगुगल विश्लेषणGoogle विश्लेषणगुगल मेरो व्यापारआईपी ​​कालोसूचीमोबाइल एनालिटिक्समोबाइल गतिखोज एनालिटिक्ससामाजिक एनालिटिक्सSSLवेबसाइट अनुगमनवेबसाइट अनुकूलन
स्थानीय एसईओ: एक उद्धरण के हो? उद्धरण भवन?